ESAT Afaan Oromo – Page 60 – ESAT Afaan Oromo
Parlaamaan Gamtaa Awurrooppaa hidhamuu Dr Maraaraa Guddinaa ilaalchisee ibsa gaha akka kennuuf Mootummaa Itoophiyaa gaafate
Pirizidaantiin Parlaamaa Gamtaa Awurrooppaa Martin Schulz xalayaa pirizidaantii Itoophiyaa Dr Mulaatuu Tashoomaatiif bareessaniin, hidhamuun Dr Maraaraa Guddinaa akka isaanii Yaaddeessee beeksiisaniiru. Parlaamaan Gamtaa Awurrooppaa yakkii Dr Maraaraan ittin himataman akka ibsamuuf barbaada jedhan. Dr Maraaraan kan hidhaman ji’a Sadaasa guyyoota muraasaaf Biraasilis turaniitti, miseensoota parlaamaa gamtaa Awurrooppaa wajjiin mari’atanii gara biyyaatti wayita deebi’aan akka ta’ee xalayaa isaanii kanan yaadachisaniiru. Dr ...
Mootummaan Itiyoopiyaa sarbamuu Mirga Namoomaa Dhoksuuf tajaajila Interneetii akka cufee Aminstii Internashiinaal beeksiiseera.
Mootummaan Itoophiyaa tarkaniiffii seeraan alaa loltoonni mootummaa ummataa irraatti fudhatan uwwisa miidiyaalee akka hin arganeef caasaalee oduu toora Interneetii 16 akka cufe Amnestii Internaashinaalii gabaasa baseen beeksiiseera. Tarkaniiffii Mootummaan Itoophiyaa caasaalee toora interneetii dabalatee, tajaajila Interneetii gutumaatti cufuu fi to’aachuuf fudhateen, paartii mormitoota fi qamooleen mirga namoomaaf falmaan miidhhaf saaxilamuu isaanii qorannaan Amnestii Internaashinaalii Jarmiyaa Observatory of Network Interference jedhamu ...
Mootummaan Itoophiyaa tekeneloojii toora Interneet basaasuuf gargaaru diippii Paakkeet Inspekeeshiin (Deep Packet Inspection) ja’mu fayyadamaa jira ja’me.
Tekeneloojiin diippii Paakkeet Inspekeeshiin kun hojiilee nageenyaa wajjiin wal qabatee hojjatamuuf kampaaniiwwaan addunyaa garaagaraatin kan dhiyaatudha. Haa tahuutii garuu, Mootummaan Itoophiyaa tajaajila tekeneloojii kanaa tajaajila interneetii basaasuu fi tohaachuuf akka itti fayyadamu Amnestii Internaashinaal beeksiiseera Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa toora Interneeti mootummaan cufaman akkasumsa tajaajila interneetii fayyadamuun erga namoonni gara Imeeliitiin waliif ergan hordofuuf itti fayyadama akka jiru dhaabbanni mirga ...
Miseensoonni Parlaamaa Biriteen dhimmaa Andargaachoo Tsiggee ilaalchisuun waltajjii falmii torbee dhufu keessa akka qopheessan beekameera.
Miseensoonni Parlaamaa Biiriteen dhimmaa Andargaachoo Tsiggee ilaalchisee tarkaniiffii mootummaan biyyaattiin fudhatamuu qaburraatti waltajjii falmii torbee dhufu akka qopheessan beekameera. Ji’oota muraasaa booda Andargaachoo Tsiggee bakka bu’oota mootummaa Biiriteeniin akka hin daawwatamne dhorkamuun miseensoota Parlaamaa fi qamoolee mirga namoomaaf falman biraatti sodaa uumeera Miseensoonni parlaamaa tarkaaniiffii dippilomaasii Mootummaa isaan fudhachuu qabu irratt mari’achuuf kibxataa dhufu waltajjii falmii addaa akka qopheessan dhaabbanni ...
Dr Maraaraa Guddinnaa erga hidhamanii guyyoota 15n booda yeroo jalqabaaf Abbukatoota isaanii wajjiin mari’atan
Dr Maraaraan erga mana hidhaa sukkaneessaa Maa’ikalaawwiitti hidhamanii guyyoota 15 booda yeroo jalqabaaf Abukaatoota isaanii Obboo Wandimmuu Ibsaa fi Dr Yaaqoob Haayla Maariyaam wajjiin wal arganii mari’ataniiru. Akka Abukatoon isaanii Obboo Wandimuu Ibsaa sagalee Amerikaa sagantaa Afaan oromootti himanitti, Dr Maraaraan harki isaanii caancalaan waliitti hidhameetti kan isaanii wajjiin mari’atan. Himmaannaa isaani irratti dhiyaatee labsii yeroo hatattaamaa darbuu fi shororkeessummaa ...
Dhaabbata Mootummoota Gamtomaniitti Ambaasaaddarri USA hidhamtoonni siyaasaa gadi haa dhiifaman jechuun duula jalqaban.
Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Ambasaddarri US Samantha Power namoota ilaalchi siyaasa isaanii mootummaa irraa waan adda ta’e qofaaf hidhaman mana hidhaatii gadi haa dhiifaman jechuun duula marsaa Tiwutaariin jalqabaniiru. Kaayyoon duula kanaa jireenya suukanneessaa hidhamtoonnii fi maatiin isaanii keessa jiran addunyaatti beeksiisuun mootummoonni akka gadhiisan hubachisuuf akka ta’e ambsaddarri Samantha Power beeksisaniiru. Duula Marsaa Tiwutariin guyyoota 10niif turu kanaan eenyummaan hidhamtoota ...
Balaa Hongee haaraa Itoophiyaa Mudateen gargaarsi Dolaarri Biiliyoona tokkotti dhiyaatu Akka Barbaachisu Mootumman Gamtooman beeksiise.
Balaa hongee haaraa Itoophiyaa muudateef namoota miliyoona jahatti dhiyaataniif midhaan nyaataa dhiyeessuuf dolaarri miiliyoonni 900 akka barbaachiisu dhaabbanni mootummoota gamtomaanii beeksiisera. Gargaarsi bara kanaa kan bara darbee wajjin yoo wal biratti ilaalamu dhibbentaa 44 akka caalus dhaabbatichi beeksiiseera. Namoota miiliyoona jahaan ala daa’immanii fi dubartoota ulfaa miiliyoona 1 fi kuma 200f nyaata madaalawaa dhiyeessuu barbaachiisa jedhameera. Bara Faranjootaa haaraatti daa’imman ...
Biyyoota Gammoojjii Sahaaraa gadi jiranitti Dhukkubni Busaa rakkisaa jiraachuu Dhabbanni Fayyaa Addunyaa beeksiise.
Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afriikaa Gammoojjii Sahaaraa gadi jiratanitti dhukkubni Busaa rakkoo fayyaa ta’ee akka itti fufe Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa Beeksise. Akka gabaasa dhaabbatichaatti waggaa darbe qofa namoonni kuma 400 ol dhibee busaatiin du’aaniiru. Biyyoota kanniin keessatti namoonni miiliyoona 400 ol dhibee busaatiif akka saaxilaman himameera. Itoophiyaan waggoota sadeen darban tamsa’ina dhibee busaa irraa bilisa jedhamuuf duula jalqabdus, yeroo ammaa lammiileen ...
Lakkofsi Gaazixeessitoota hidhamanii dabaluusaa Dhaabbanni Mirga Gaazexxessitootaaf Falmu beeksiise.
Bara faranjootaa xumuramaa jiru keessa lakkofsi Gaazexxessitoota hidhamanii akka dabale Dhaabbanni Mirga Gaazexxestootaaf falmu yookan Committee to protect Journalist jedhamu beeksiiseera. Itoophiyaan gaazexeessitoota 16 hidhuun biyyoota Afriikaa keessaa sadarkaa sadaffaarra akka jirtu dhaabbatichi beeksiseera. Biyyoota Gaazexxestoota hidhuun beekaman keessaa Tarkiin 81, Chaayinaan 38, Ijipti 25,Eertiraan 17 akkasumas Itoophiyaan gaazexxestoota 16 hidhuun biyyoota addunyaa keessaa adda durammaan argamu. Itoophiyaa keessatti erga ...